पलपलका खबर - Page 186 of 198 -
मुगु । नेपाली सेनाको श्रीदल गुल्मको आयोजनामा छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर ९ मुर्माको माझघट्टमा एकदिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ । श्रीदल गुल्मको आयोजना र श्री नम्बर २४ …
काठमाण्डाै – भौतिक पूर्वाधारको तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले काठमाण्डाै-केरुङ र काठमाण्डाै-रक्सौल रेलमार्गको डीपीआर एक वर्षभित्र पूरा गर्ने बताउनुभएको छ । लगानी सम्मलेनमा पूर्वाधार सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महासेठले पूर्व सम्भाव्यता …
वाईडवडी काण्डबारे छानविन गर्ने बताएका इन्जिनियर आफै विमानमा उडेपछि…
काठमाडौं । वाईडबडी जहाज खरिदमा ठूलो घोटाला भएको र भ्रष्टाचारमा संलग्नको पर्दाफास गर्ने घोषणा गरेका ‘पब्लिक इनोभेटर’ ई. दिपेन्द्र कँडेल आँफै सो जहाज चढेर सुटुक्क दिल्ली गएका छन् । नेपालमा …
हतियार कारखानामा छापा, हतियार बनाउने सामग्रीसहित जङ्गबहादुर पक्राउ
राँझा । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं ५स्थित डिएसपी रोडमा हतियार बनाउने कारखानामा छापा मारेर प्रहरीले हतियार र हतियार बनाउन प्रयोग गरिने सामग्री बरामद गरेको छ ।प्रदेश नं ५ प्रहरी अनुसन्धान …
हिउँदको समय । रातको बेला । रात उजेलिएको छ, आकाशमा लागेको टहटह जुनले । घरको माथिल्लो तलाको बीचको झ्याल । झ्यालबाट बाहिर एकतमासले हेरिरहेकी छिन् । टोलाइरहेकी छिन्, उनी । …
डाक्टरहरू भन्दछन् यी खानेकुराको सेवन गर्नाले ९० प्रतिशत रोग लाग्नेछैन
आजभोली हाम्रो खानपान र रहनसहनका कारण दैनिक थुप्रै मानिसहरू अनेकौँ रोगको सिकार बन्दैछन् । प्रस्तुत छ अमेरिका र युरोपका डाक्टरहरूको अध्ययन र अनुसन्धानको रिपोर्टले बताएअनुसार मुटु र शरीरका लागि अत्यन्तै …
के मानवले अर्काे शताब्दी देख्न पाउँछ ? मानिसको पनि कतै डायनोसरको जस्तै हविगत त हुने होइन ?
मानिसको पनि डायनोसरको जस्तै हविगत त हुने होइन ? अहिले मानवजाति जलवायु परिवर्तन, परमाणु युद्ध, महामारी अथवा पृथ्वीमा उल्का पिण्ड खस्नेजस्ता ज्यान जाने घातक खतराहरुको सामना गरिरहेको छ । रेडियो …
हजारौँ भक्तजनको भीड लाग्ने धार्मिक ‘बालपुरी मठधुनी मन्दिर’पर्यटकीयस्थल बन्दै !
परासी – पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–१ छिवनीस्थित बालपुरी मठधुनी मन्दिर धार्मिक पर्यटकीयस्थल बन्दै गएको छ । प्राचीन समयदेखि नै निरन्तर बलिरहेको अखण्ड धुनी र खुर्सानीको हवन हुने भएकाले यहाँ भक्तजन …
क्यान्सर, मोटोपना र दम लाग्नै नदिन लागेपनि केही दिनमै चैट बनाउने यो फल खानुहोस्
काठमाडौं । हाम्रो पृथ्वीमा सजिव प्राणीका अमृत बुटीहरुपनि छन् । त्यही अमृत बुटी मध्य किवि एक अति महत्वपूर्ण फल हो । यो फल अण्डा आकारको फल हो, जो बोटमा लहरामा …
धनकुटामा बाबुले आफ्नै छोरीको बलात्कार गरेर गर्भवती बनाए !
काठमाडौं । छोरी बलात्कार गरी गर्भवती बनाएका एक व्यक्तिलाई जिल्ला अदालत धनकुटाले जन्मकैद सुनाएको छ। न्यायाधीश विनोदकुमार पोखरेलको इजलासले बिहीबार यस्तो फैसला गरेको हो । क्षतिपूर्तिबापत ५० हजार रुपैयाँ भराउनेसमेत …